Samsung nwere ike inwe nsogbu na ngwaahịa nke Samsung Galaxy Note 7 | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụ ezie na ọtụtụ echegoro ma ọ bụ karịa na anyị chere na Samsung Galaxy Note 7 bụ vitamin Galaxy S7 Edge, ọ dị ka eziokwu ahụ dị iche na ndị chọrọ ịzụta ama ama dị elu na-ahọrọ ọhụụ Samsung ọhụrụ a maka ịzụta ha.
Yabụ ugbu a ọtụtụ ụlọ ahịa na-egosi na ha nwere nsogbu ndoputa na ọdụ Samsung a. Companylọ ọrụ ahụ na-ekpughe na ọ nwere nsogbu ngwaahịa, ya bụ, nwere nnukwu ọchịchọ maka Samsung Galaxy Note 7, ihe ha na-arụ ọrụ iji dozie.
Samsung nwere nnukwu ọchịchọ maka Samsung Galaxy Note 7 mana ihe kachasị dị ize ndụ maka ụlọ ọrụ ahụ bụ na na ụbọchị ole na ole, a na-atụ anya ịmalite Apple ọhụrụYabụ, ọ bụrụ na ọtụtụ ndị ọrụ ahụghị afọ ojuju ha chọrọ, ha ga-ahọrọ akara Apple ma agaghị aghọrọkwa Samsung Galaxy Note 7 ọnụ.
Ọchịchọ maka Samsung Galaxy Note 7 ga-akarị nke ụdị ndị gara aga
Ihe a na-achọ bụ na Samsung na-egosi na a na-ere ma na-echekwa ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ karịa mgbe Samsung Galaxy Note 5 ma ọ bụ Samsung Galaxy S6 Edge Plus malitere, njedebe ndị dị elu nke ka na-adọrọ mmasị n'agbanyeghị na ha nwere oge ụfọdụ. Mana ọ dị ka ihe nyocha Iris ma ọ bụ S-Pen ọhụrụ na-adọta uche ọtụtụ Ma obu otua ka odi.
Ekwere m n'onwe m na ọchịchọ a dị adị mana nke ahụ ga-emerụ Samsung Galaxy S7 Edge, ọnụ nke yiri ka ọ jọkarịrị njọ ma e jiri ya tụnyere nke ọhụrụ Galaxy Note 7 ebe ọ bụ na myirịta ya dị elu mana mana Note 7 na-enye ndị ọrụ ihe ọzọ ọ bụ ezie n’ikpeazụ ha anaghị eji ya.
N'ọnọdụ ọ bụla, mmepụta nke Samsung Galaxy Note 7 na-arịwanye elu iji nweta nnukwu ọchịchọ, ọchịchọ nke na-achọ ịmata mgbe ọ bụla Samsung wepụtara ngwaọrụ ọhụrụ, nke na-egosi na Samsung enweela fanboys dị ka Apple. Nke ahụ bụ ihe ọnụ ọgụgụ ndị ahụ na-egosi n'agbanyeghị na anaghị ahapụ ha nke ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Samsung nwere ike inwe nsogbu na ngwaahịa nke Samsung Galaxy Note 7
Bullet V2, ekwe ekwe ekwe OnePlus ọhụrụ ị nwere ike ịzụta naanị euro 19.95